नेपाली कलासंस्कृतिका सशक्त कलाकार पन्नाकाजी - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
नेपाली कलासंस्कृतिका सशक्त कलाकार पन्नाकाजी
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७३, सोमबार
टीका भण्डारी, वरिष्ठ संगीतकार/गायक
तिरिरी मुरली बज्यो बनैमा ,बनैमा लौ माया नमारे
कस्को यो सम्झना मेरो मनैमा ,मनैमा लौ माया नमारे
किन किन तिम्रो तस्बिर मलाई निको लाग्छ, लोलाएका ती तिम्रा, हामीलाई छाडी दाई त अब एकानी दुवानी, रात यो नबित्ला , जुनको परेली, बतासले, लालीगुराँस फुल्यो, मैले सिङ्गै वसन्त आदि गायक तथा संगीतकार पन्नाकाजीलाई चिनाउने आधुनिक पुराना तथा सदाबहार गीतहरु हुन् ।
बाल्यकाल र परिवार
नेपाली सांगीतिक आकाशका एक सुरिला खम्बा हुन् पन्नाकाजी । संगीतका हस्ती नातिकाजी शिवशंकर भन्दा अघि २००७ साल मै रेडियो नेपाल प्रवेश गरेका पन्नाकाजीको नेपाली संगीतको क्षेत्रमा नाम उच्च स्थानमा रहेको छ । बि. स.१९८८ साल पौष १५ गते ९ ८४ वर्ष अघि काठमाडौँको ओमबहालमा माता बालकुमारी शाक्य र पिता चतुर्मान शाक्यका कान्छा पुत्ररत्नका रुपमा जन्मिएका हुन् । उनी ४,५ बर्षको उमेर देखिनै घरमा तोते बोलीमै गीत गाउने गर्थे । यो सुनेर उनका पिता चतुरमान खुशी हुँदै उनलाई भजन सुनाउँथे । नभन्दै ९९१० बर्षको उमेर देखि राम्रैगरी भजन तथा अन्य गीतहरु पनि मजैले गुनगुनाउन थाले उनी । केटाकेटीले गीतमा लय हालेर गाएको सुन्दा रमाईलो मान्दै उनलाई काखमा राखेर गीत गाउन लगाउँथे उनका अग्रजहरु । उनी पनि खुशी हुँदै गीत गाउँथे । १५–१६ बर्षको उमेरमा त उनी आफ्नो टोल, स्कुल लगायतका ठाउँहरुमा विभिन्न गीतहरु गाएर, नाटकमा अभिनय गरेर सबैको प्यारो भईसकेका थिए । त्यसैले उनलाई त्यस बेलाका नाटकहरुमा राजकुमार,राजा जस्ता भूमिकाहरूमा खेलाईन्थ्यो । उनले २००४ साल देखि त औपचारिकरुपमै गीत गाउन थालेका हुन् । उनले नास खलः, बिषन्तरया मच्चादान, कुंडाल जस्ता नाटकहरुमा खेले । उनी स्टेजमा सम्बाद मात्र हैन मिठासपूर्ण ढङ्गले गीत पनि गुन्जाउँथे । यसले गर्दा स्टेजमा सबैको आकर्षणको केन्द्र बिन्दु बन्थे उनी । पन्नाकाजी २० वर्षको उमेरमा ज्ञानदेबीसँग बैवाहिक जीवनमा बाँधिए जसले आफूभन्दा अघिनै धर्ती छोडेर गईन् । एक छोरी ४ छोराका पिता पन्नाकाजीका दुई सुपुत्र प्रबेशमान शाक्य र पवित्रमान शाक्य नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका प्रसिद्ध गायक हुन् ।
रेडियो नेपालको जागिर
सुमधुर स्वरका धनी गायक पन्नाकाजी सांगीतिक जीवन बिताउन चाहन्थे । त्यतिबेला संगीतमै जीवन रमाउन सक्नु, बिताउन सक्नु सामान्य कुरा थिएन । ईच्छाशक्ति प्रतिभा र क्षमता भए मानिसले ढिलो चाँडो अवसर प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने दह्रो आत्मबिश्वास लिएका उनलाई एकदिन उनकै परमप्रिय मित्र रेडियो नेपालका प्रथम गायक हरिप्रसाद रिमालले रेडियो नेपालमा जागिर खान सुझाए । यसबाट उनीमा आफुमाथि बिस्वास पलायो । रेडियो नेपालका संस्थापक व्यक्तित्व नाटक निर्देशक बालकृष्ण समले उनको प्रतिभा तथा गायन दुबैको परीक्षा लिए । समले निकै मनपराए र उनको बिशेष सिफारिसमा रेडियो नेपालका प्रथम डाईरेक्टर तारणीप्रसाद कोईरालाले यिनलाई गायकका रुपमा नै जागिर दिए । २००७ सालमै र २००८ साल देखि उनले स्थाई नियुक्ति पाए जुन जागिरे जीवन उनको २०४० सालसम्म अनवरतरुपमा रह्यो । त्यहीं उनले नासु पदबाट स्वैच्छिक अवकाश पनि प्राप्त गरे ।
संगीतमा नारायणगोपाल, स्वरमा पन्नाकाजी प्रथम
त्यसबेला रेडियो नेपालले आधुनिक गीत प्रतियोगीता अत्यन्तै भब्यरुपमा उत्सव झैं मनाउने गथ्र्याे । ४ दिवशीय ५ दिवशीय प्रतियोगीताहरु आयोजना हुन्थे । रेडियो नेपालमा प्रथम भएका गायक गायिकाको शान, मान, सम्मान र प्रतिष्ठानै बेग्लै हुने गथ्र्याे । २०२२ सालमा पन्नाकाजी रेडियो नेपालद्वारा आयोजित आधुनिक गीत प्रतियोगीतामा गायन तर्फ प्रथम भए भने सोही स्टेजबाट नारायणगोपाल संगीतमा प्रथम भए । त्यसबेला नारायणगोपालको भन्दा पन्नाकाजीको चर्चा बढी भयो । यो स्वाभाविक पनि थियो किनकि पन्नाकाजी गायनमा प्रथम भएका थिए भने नारायणगोपाल संगीतकारका रुपमा प्रथम भएका थिए । नारायणगोपालसंग पन्नाकाजीको निकै सुमधुर सम्बन्ध कायम थियो ।
पुरस्कार नलिने घोषणा
पन्नाकाजीले जीवनमा धेरै पुरस्कारका अफरहरु अस्विकार गरे । पुरस्कार किन लिनु हुन्न, पुरस्कार प्रतीको बिश्वास र सम्मान किन म¥र्याे तपाईंमा भन्ने प्रश्नमा ‘कुनै पनि कलाकारलाई गरिने सबै भन्दा ठुलो सम्मान भनेको उनीहरुद्वारा गाईएका, संगीतबद्ध गरिएका र लिपीबद्ध भएका गीतहरु सम्मानपुर्बक प्रसारण गर्नु हो ।’ जसले नेपाली संगीतको जग खने, दुख सहेर नेपाली संगीतको सुन्दर मुहार निर्माण गरे आज तिनका गीत संगीत रचनाहरु आक्कल झुक्कल बाहेक कहाँ प्रसारण हुन्छन ? घर घरमा रेडियो स्टेसन छन् तर ती श्रष्टाहरुका गीत बज्दैनन अनि के को लागि सम्मान लिने, किन लिने ? सम्मान शब्दमा हैन व्यवहारमा हुनुपर्छ, ओठको सम्मान हैन हृदयले सम्मान गरिनु पर्छ । अरु त अरु राज्यले खै कहाँ चिन्न सक्यो त राष्ट्रका ती संस्थापक स्रष्टा सर्जकहरुलाई, देखावटी सम्मान बेकार हो । केही महत्वपूर्ण अवार्ड त लिनु भयो नि त प्रश्नमा ‘ढाँटनु हुँदैन पाप लाग्छ, त्यसबेला त हामी पुराना कलाकारका पनि गीत बज्थे, रेडियो नेपालबाट पनि बज्थे, भर्खरै प्रजातन्त्र आएको थियो । त्यो जोशमा स्वर्णिम गीतहरु पनि रेडियोहरुबाट खुब बजे, खुशी भए हाम्रा पनि दिन आएछन्भनेर । पुरस्कारहरु पनि लिएँ जब हाम्रा गीत बज्न छोडे त्यसपछि मैले पुरस्कारको नाम सुन्ने बित्तिकै इन्कार गर्न थालें । वास्तवमा दिन आएका हैनन दिन त गएका पो रहेछन् । जसले पुरस्कार दिन्छु भन्छ पहिला पुराना श्रष्टाहरुको गीत बजाउनुस् त्यसपछि पुरस्कार लिन आउँछु भन्ने ग¥याछु । तर उनले सर्बाेत्तम साधक गायक, नातिकाजी सम्मान, बीरेन्द्र पदक, गोदवा २०३९, रेडियो नेपाल सेवा पदक, शुभराज्यभिषेक पदक, ईमेज लाईफटाईम अचिभमेन्ट अवार्ड लिएका छन् ।
राजा महेन्द्रका मनपर्ने गायक
पन्नाकाजी नेपाली संगीत प्रेमीहरु माझ लोकप्रिय थिए र आजपनि छन् । त्यसबेला राजपरिवारका पनि प्रिय गायक हुन् उनी । विभिन्न अवसरहरुमा राजदरबारमा पनि सांगीतिक कार्यक्रमहरु भई नै रहन्थे । ती कार्यक्रममा दुई काजीहरू अनिबार्य उपस्थित हुनु पथ्र्यो (पन्नाकाजी र नातिकाजी) । पन्नाकाजी राजा महेन्द्रका निकै प्रिय थिए । बेलाबेलामा मौसुफबाट निम्तो बख्स भयो तुरुन्त आउनु प¥र्याे भनेर खबर पाईरहन्थे उनी । दरबारमा उनी लगायत नातिकाजी, तारादेवी, ज्ञानबहादुर आदिको बिशेष गायन प्रस्तुति रहन्थ्यो । कार्यक्रम सकिएपछि राजा कलाकारहरुसँगै बसेर गफिंदै खानेकुराहरु खान्थे । खाए नखाएको, यो खाउँ कि त्यो खाउँ, मिठो नमिठो, दुख सुख के कसो छ सबै सोध्थे । महेन्द्र कलाकारलाई मन पराउँथे ।
रेडियो नेपालमा उनका स्वरहरु
पन्नाकाजी रेडियो नेपालले जन्माएका एक स्वर्णिम गायक हुन् । उनको स्वर्णिम सपना थियो रेडियो नेपाल । सपना सोचे झैं साकार भयो । उनीभित्रकै सिर्जनात्मक एबं कलात्मक प्रतिभा र क्षमताले गर्दा उनी सफल भएका हुन् । उनको उर्वर बैश, जीवनका हर महत्वपूर्ण दिनहरु उनले रेडियो नेपालमै बिताए । सिंगो जीवन रेडियो नेपाल, नेपाली संगीत, नेपाली स्रष्टा सर्जकहरू प्रती समर्पित गरे । पन्नाकाजीले सांगीतिक जीवनको सुरुवाती चरणमा रेडियो नेपालमा रात यो नबित्लादेखि कसरीमा बिर्सुंसम्म आइपुग्दा पन्नाकाजीको जीवनमा निकै महत्व राख्ने र स्रोताको जीवनमा पनि अर्थ राख्ने गीतहरु सयौं प्रकाशन भएका छन् । यिनै गीतहरु नै गायक तथा संगीतकार पन्नाकाजीका जीवनका अमुल्य कृतीहरु हुन् ।
गायक पन्नाकाजीले रेडियो नेपालमा आधुनिक, भजन, स्वदेशगान, लोकगीत, नेपाल भाषा आदि गरि १०० जति गीतहरु रेकर्ड गरेका छन् भने कुल ४०० गीतहरु रेकर्ड गरेको पन्नाकाजीको ठम्याई छ । ३ वटा सोलो एल्बमहरु समेत प्रकाशित छन् । यी एल्बमहरू लिजेण्ड अफ पन्नाकाजी, (कसरी बिर्सुं म), लिजेण्ड अफ पन्नाकाजी (आफ्नो संसार), साधक गायक पन्नाकाजी (भजन किर्तन) हुन् ।
भक्ती सङ्गीत र नेपाल भाषा गीत
पन्नाकाजीले भक्ती संगीतमा पनि राम्रो स्थान बनाएका छन् । उनले रेडियो नेपालमा एक दर्जन जति भक्ती संगीत गाएका छन् । उनका मन छुने आफैद्वारा संगीतबद्ध तथा स्वरबद्ध गरिएका भजनहरु तन मन ध्यान दिई, पशुपतीनाथ प्रभु, भवसागरको नाउ, भज रामको नाम, जय जय हे त्रिपुरारी, नारायणको नाम जपौं लगायत २ दर्जन जति नेपाल भाषाक गीतहरु पनि गाएका छन् ।
प्रबेशमान, पवित्रमान र पन्नाकाजीको सम्बन्ध
नेपाली सांगीतिक क्षेत्रका चर्चित गायक प्रबेशमान शाक्य र अर्का चर्चित गायक पबित्रमान शाक्य एकै परिवारका दुई दाजुभाई हुन् । प्रवेशले ३०० जति गीतहरु गाएका छन् भने पबित्रमानले पनि ५ दर्जनजति गीतहरु गाएका छन् । प्रवेशमानले केहि नेपाली चलचित्रमा समेत गीत गाएका छन् । लाउन त प्रित लाईदियौ बहार बनी बोलको गीतबाट प्रवेशमान बढी चिनिन्छन भने कति बस्छौ ओडी लाजको घुम्टो मनमा पलाएका रहरलाई छोपी बोलको गीतबाट पवित्रमान बढी चिनिन्छन । पन्नाकाजीका ५ सन्तान मध्ये यी दुईले नेपाली संगीतमा बेग्लै परिचयसहित पिता पन्नाकाजीकै पदचिन्ह पछ्याएका मात्र छैनन् आफ्नै सांगीतिक पहिचान समेत बनाई सकेकाछन । यस सम्बन्धमा गायक पन्नाकाजी भन्ने गर्थे– ‘मैले कहिलै प्रवेश र पवित्रमानलाई गायक बन भनेर भनिन, गीत गाउ पनि भनिन, तर राम्रो राम्रो सभ्यता संस्कार र संस्कृति सिक भनेर चैं जीवनमा धेरै चोटी भने होला, उनीहरु आफै संगीतमा हेलिएका हुन्, आफै गीत संगीतको क्षेत्रमा उदाएका हुन्, मेरो नाम ले हैन ,मेरो कामले पनि हैन, तिमीहरु आफ्नै क्षमता, प्रतिभा र योग्यताले चिनिनु पर्छ भन्थें । वास्तवमा प्रवेश र पवित्रमानले पनि पिताले कल्पना र सपना कोरे झैं आ–आफ्नै बलबुता, ज्ञान र बिबेकलाई पछ्याउँदै उनीहरु संगीत र जीवनपथमा अघि बढे र सफलता पनि प्राप्त गरिरहेका छन् जीवनमा निरन्तर ।
कृष्णप्रसाद भट्टराइले गीत गाउँदा गाउँदै रोके
कलकत्तामा २०१३ सालमा तिरिरि मुरली बज्यो बनैमा लगायतका गीत गाउँदा पन्नाकाजीसंग आत्मिय सम्बन्ध रहेका पूर्व प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि संगै स्टुडियोमा थिए । पन्नाकाजीले एकपल्ट तिरिरि मुरली बज्यो बोलको गीत गाईसके पछि अर्काे पटक गाउँदा भयो भयो ओके ओके फेरी किन दोहोरयाको भनेर कराए कृष्णप्रसाद । सबै हाँसे स्टुडियोमा भएका मानिसहरु । उनले एकपटक मात्र गाउँछन, रेकर्ड गर्दा पटक पटक गाईन्छ भन्ने कल्पना समेत गरेका रहेनछन । त्यसपछि भने ४,५ टेक गाए पन्नाकाजीले, कृष्णप्रसाद अचम्म मानेर सुनिरहे मात्र, बिचमा भयो भयो भनेर कराएनन् ।
९ महिना जेल परे
उनी गायक संगीतकार मात्र थिएनन् । नेपाली कांग्रेसमा प्रतिबद्ध पनि थिए । पूर्व प्रधानमन्त्रि कृष्णप्रसाद भट्टराई, जनआन्दोलनका सर्बोच्च कमान्डर गणेशमानसिंह, प्रकाशमान सिंह जस्ता व्यक्तित्वहरुसंग समेत यिनको गहिरो उठबस थियो । यहीकारण २०१८ सालमा यिनले पनि ९ महिना नख्खु जेलको हावा खाए । यिनले आफ्नै हातले स्केच गरेको ५ फिटको गणेशमान सिंहको तस्बिर अझै गणेशमान सिंहको घरमा सजाएर राखिएको छ जुन उनले उनलाई उपहार दिएका थिए ।
मेरो अध्ययनमा उनी
पन्नाकाजी नेपाली संगीतका संस्थापक गायक संगीतकार त हुँदै हुन् । रेडियो नेपालका पनि उनी संस्थापक मध्येका एक ससक्त कलाकार हुन् । रेडियो नेपालको जन्म संगै उदाएका उनी रेडियो नेपाल जत्तिकै स्वाभिमानी र शालीन पनि छन् । उनलाई आफ्नो बारेमा कसैले प्रचार गरेको मन पर्दैन । उनलाई पाश्चात्य र बहुरंगी संगीतले छँुंदैन । देशलाई अति माया गर्छन । अरुलाई पनि उत्तिकै माया र अपनत्व बाँड्न चाहन्छन । पुरस्कार लिईदिनु परयो भनेर कोहि घरमा पुग्छन, पहिले गीत त बजाएर सम्मान गर्नुस त्यसपछि स्टेज सम्मानको कुरा गरौँ भन्छन् । उनी रेडियो नेपालमा संगीत महासाखामा नै जीवन बिताएका राष्ट्र सेवक कर्मचारी पनि हुन् । तर धेरैले पन्नाकाजी रेडियो नेपालमा नभएको भए अझ धेरै लोकप्रिय बन्ने थिए भन्ने गर्छन् । उनलाई जागिरे जीवनले पनि थिच्यो, उनको गायन र कलालाई पनि केहि हदसम्म त थिचेकै हो । उनका साथीहरु नातिकाजी शिवशंकर, नारायणगोपाल, तारादेबी ज्ञानबहादुर, ईन्द्रलाल, पुष्प नेपाली, उही गोबिन्दबहादुर गुरुङ, रामहरी गुरुङ आदि उनलाई अति माया गर्थे । सिर्जनाका क्रममा तिनका घरमा उनि पुग्थे, उनका घरका घरेलु कार्यक्रममा उनीहरु चुल्हे निम्तो मान्न आइपुग्थे । यसबाट पन्नाकाजीको सहकार्य र स्वर्णिम युगका स्रष्टा सर्जकहरुसंगको सम्बन्ध प्रष्टिन्छ । नारायणगोपालले उनका छोरा प्रबेशमानको बिवाहमा गरेका रमाईला सम्बाद अझै उनले बिर्सेका छैनन । नेपाली संगीत शिखर अम्बर गुरुङ्गले पबित्रमानलाई बाबुको बिंडो थाम्न दिएका सुझाव अहिले पनि झल्झली सम्झिरहेका छन् । यसबाट पनि पन्नाकाजीको महत्व झल्किन्छ ।
लेखकः वरिष्ठ संगीतकार, गायक एवं रेडियो नेपालका उपनिर्देशक हुनुहुन्छ ।